Orinasa sy mpanamboatra Steam Steam And Rotary Retort | Dingtaisheng
Ataovy ao anaty retort sterilization ny vokatra, ny varingarina dia voafintina tsirairay ary manidy ny varavarana. Ny varavarana mamaly dia azo antoka amin'ny alàlan'ny fifamatorana telo. Mandritra ny fizotrany rehetra, mihidy mafy ny varavarana.
Ny rano mafana dia atsofoka ao anaty valiny amin'ny alàlan'ny fitoeran-drano mafana, ny rivotra mangatsiaka ao amin'ny retort dia esorina, avy eo atsindrona ny etona eo an-tampon'ny retort, ny vavahady etona ary ny tatatra dia ampifanarahana, ary ny toerana ao amin'ilay valiny feno setroka. Aorian'ny fivoahan'ny rano mafana rehetra dia manohy manafana hahatratra ny hafanan'ny sterilization. Tsy misy toerana mangatsiaka amin'ny fizotran'ny fanamorana. Rehefa tapitra ny fotoana fanamainana dia niditra ny rano mangatsiaka ary nanomboka ny dingana mangatsiaka, ary ny tsindry ao amin'ny retort dia voafehy tsara mandritra ny fizotran'ny fihenam-bidy mba hahazoana antoka fa tsy ho simba ireo kapoaka noho ny fahasamihafana eo amin'ny tsindry anatiny sy ivelany.
Amin'ny dingana fanafanana sy fihazonana, ny tsindry ao amin'ny retort dia vokarin'ny tsindry avon'ny setroka. Rehefa ampidinina ny mari-pana dia hiteraka tsindry hanoherana mba tsy hiova endrika ny fonosana vokatra.
Mandritra ny fizotrany iray manontolo, ny hafainganam-pandehan'ny fihodinan'ny vatana sy ny fotoana ivoahan'ny vatana dia voafaritry ny fizotran'ny fanamorana ny vokatra.
Fitsinjarana hafanana fanamiana
Amin'ny alàlan'ny fanesorana ny rivotra ao amin'ny sambo retort, dia tratra ny tanjon'ny sterilization setroka tototry. Noho izany, amin'ny fiafaran'ny dingana vent vent, ny hafanana ao anaty sambo dia tonga amin'ny fanjakana tena mitovy.
Araho ny fanamarinana momba ny FDA / USDA
Tsotra sy azo antoka
Raha ampitahaina amin'ny endrika hafa amin'ny sterilization dia tsy misy fitaovana fanamafisana hafa ho an'ny dingana fanatonana sy fanamafisam-peo, noho izany ny etona ihany no mila fehezina mba hampifanaraka ny andiana vokatra. Nanazava tamin'ny antsipiriany ny famolavolana sy ny fiasan'ny retort etona ny FDA, ary maro ny canneries taloha efa nampiasa azy io, ka fantatry ny mpanjifa ny fitsipiky ny fiasan'ity karazana retort ity, izay mahatonga ity karazana retort ity ho mora eken'ny mpampiasa taloha.
Ny rafitra mihodina dia manana rafitra tsotra sy fampisehoana marin-toerana
> Ny firafitry ny vatana mihodina dia voahodina ary miforona amin'ny fotoana iray, ary avy eo dia atao ny fitsaboana voalanjalanja mba hiantohana ny fitoniana amin'ny fihodinana
> Ny rafi-roller dia mampiasa mekanika ivelany iray manontolo amin'ny fikarakarana. Tsotra ny rafitra, mora tazomina ary manitatra ny androm-piainan'ny serivisy.
> Ny rafitra manery dia mampiasa varingarina roa sosona hizara sy hikambana ho azy, ary ny firafitry ny torolàlana dia omena lanja mba hahalava ny androm-piainan'ny varingarina.
Keyword: Rotary retort, retort, Tsipika famokarana sterilziation
＞ zava-pisotro (proteinina legioma, dite, kafe)
Products vokatra vita amin'ny ronono
＞ legioma sy voankazo (holatra, legioma, tsaramaso)
Food Sakafo zazakely
＞ Sakafo vonona hihinana, Porridge
Food Sakafo biby
Previous: Fandrobohana rano sy valisoa Rotary
Manaraka: Rafitra famerenam-bidy tsy misy volo
Rano manarona Rotary Autoclave Retort
Rano fampidiran-drano Rotary